‘दशैंको टीकामा एक रुपैयाँ दक्षिणा पाउँदा रोएको क्षण कहिल्यै बिर्सिन्नँ’
परिवारसँग काठमाडौंमा घरमै बस्ने । टीका लगाउने । अरूको घरमा नजाने ।
आफन्तको घरमा टीका लगाउन जाने कुरा र साथीभाइसँगको भेटघाट । शायद यी कुरा नै मुख्य छुटेका कुराहरू हुन् ।
दशैं सधैँ उत्साह बोकेर आउँछ । धुमधाम मनाइन्छ । तर, यसपटकको दशैं होला जुन अब सधैँ सम्झनलायक हुनेवाला छ, किनभने, यसपटकको दशैंमा धेरैको हातबाट टिका लगाउन पाइने छैन । साथीभाइहरूसँग भेटघाट पनि खासै हुनेवाला छैन । असाध्यै खल्लो होला योपटक दशैं ।
आफूभन्दा ठूलाको आशीर्वाद लिनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यो बाहेक वर्षमा एकपटक टाढा रहेका आफन्त र साथीभाइहरूसँग भेटघाट हुनु पनि महत्त्वपूर्ण कुरा होला ।
पहिले थियो । पहिलेजस्तो पछिल्लो समय दशैंमा सपिङ गर्दाको आनन्द खासै छैन । तर, यसपटकको दशैंमा मैले सपिङ गर्ने योजना बनाएको छैन । पुरानै पहिरनमा दशैं मनाउँदैछु ।
राम्रो कुरा सबैजना जम्मा हुँदा पारिवारिक वातावरण झन गाढा हुन्छ । यसको नकारात्मक पक्ष भनेको के हो भने, हुने खानेलाई दशैं हो, नहुनेलाई दशा हुन्छ ।
हो त्यस्तै लाग्छ । अहिले दशैंको नाममा पार्टी, जमघट, पिउने काम अलिकति बढी भएको हो कि । साँच्चैभन्दा दशैंको रौनक पहिलाजस्तो छैन, साह्रै भड्किलो हुँदै गएको छ ।
दशैंका बेला खानपानमा खासै ध्यान दिएको पाइँदैन नि ? किन होला ?
स्वास्थ्यभन्दा ठूलो केही छैन, त्यसैले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर मात्रै रमाइलो गर्नुपर्छ । स्वास्थ्यको वास्ता नराखेर खानपान गर्दाको परिणाम आफैँले भोग्नुपर्छ ।
सानो छँदा दशैंमा नयाँ लुगा किन्ने र त्यो पहिरनमा चिटिक्क परेर मामा घर जाने, साथीभाइहरू भेट्न जाने गरिन्थ्यो । रमाइलो कुरा त के हो भने मेरो घरमा म र मेरो दाइ (सीताराम कट्टेल)लाई एउटै कपडा सिलाइदिनुहुन्थ्यो । शायद सानो छँदा हामीले सधैँजसो एउटै कपडा लगाइन्थ्यो । तर, ठूलो भइयो, त्यसपछि एउटै पहिरनमा कहिल्यै हामी भेटिएका छैनौं ।
मामाघरको हजुरआमासँग बच्चा हुँदाको समयमा पैसा पाइन्छ भन्ने आशमा झण्डै एक दिन म एक्लै हिँडेर टीका लगाउन गएको थिएँ । मामाघर त्योभन्दा अघि जाँदा धेरै पैसा पाइन्थ्यो । तर, एक पटकको दशैंमा ठूलो आशा बोकेर एक दिन लगाएर दशैंको टीका लगाउन गएँ । तर एक रुपैयाँ दिनुभयो हजुरआमाले । त्यसपछि म निकै रोएँ । यो क्षण मैले कहिल्यै बिर्सन्नँ ।
बुनुको ‘तिमी मेरो हुन सकेनौ’ [भिडियोसहित]
अभिनेत्री ऋचा शर्माले जन्माइन् छोरा
भाइरल भयो रकुलप्रितको यो जादुमय भिडियो [भिडियो]